महामारीलाई जित्दै संसार, सोमवारवाट लकडाउन हटाइने – Sandesh Press
महामारीलाई जित्दै संसार, सोमवारवाट लकडाउन हटाइने
June 7, 2021 649
लामो समय निकै आ’क्रान्त पारेको महामारीवाट भारतीय जनताले अब राहत पाउने भएका छन् । भारतको राजधानी दिल्लीमा सोमवारबाट बन्दाबन्दी खोल्न लागिएको छ। महामारीको दोस्रो लहरले निकै आक्रान्त पारेको दिल्लीमा पछिल्लो समय संक्रमितको संख्या ह्वात्तै घटेपछि अब जिवन सहज बनाइन थालिएको हो ।
दुई महिना पछि अब सर्वसाधारण स्वास्थय मापदण्ड अपनाउँदै वाहिर निस्कन पाउने भएका छन् ।दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले सोमबार बिहान ५ बजेबाट बन्दाबन्दी खोल्न लागिएको बताएका छन्। को’रोना नियन्त्रण गर्न सफल भएकाले बन्दाबन्दी खोल्न लागेको केजरीवालले बताएका छन्।
भर्चुअल पत्रकार सम्मेलन गरेर मुख्यमन्त्री केजरीवालले भनेका छन्, “अहिले लगाएको बन्दाबन्दी सोमबार बिहान ५ बजेसम्म छ। त्यसपछि क्रमिक रुपमा बन्दाबन्दी खाल्न गइरहेका छौं।” पछिल्लो २४ घण्टामा दिल्लीमा ४०० संक्रमित थपिएका छन्। जबकी डेढ महीनाअघि २२ अप्रिलमा एकै दिन २८ हजार संक्रमित थपिएका थिए।
अहिले दिल्लीमा संक्रमणदर ०।५ प्रतिशतमा झरेको छ। डेढ महीनाअघि ३० प्रतिशतको हा’राहारीमा थियो। नेपाल अहिले संक्रमणदर ३० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ। दिल्लीमा भोलिबाट बजार र सपिङ मल खुल्ने भएका छन्। बिहान १० बजेदेखि राति ८ बजेसम्म पसल र सपिङ मल खोल्न पाइने भएको छ।
यसका लागि जो’रविजोर नम्बर लागू हुने भएको छ। त्यस्तै, सरकारी कार्यालय लगायतका सेवाहरु संचालन हुनेछन् । अति भि’डभाड हुने क्षेत्रवाहेक अन्य सबै क्षेत्र खुला गरिने बताइएको छ । सरकारी कार्यालयमा समूह ‘ए’ सबै कर्मचारीले कार्यालय आउनुपर्ने भएको छ।
त्योभन्दा तलका ५० प्रतिशत कर्मचारीलाई मात्रै कार्यालयमा बोलाउन निर्देशन दिइएको छ। गैरसरकारी कार्यालयमा पनि ५० प्रतिशत कर्मचारी राखेर काम गर्न भनिएको छ। अन्य कर्मचारीलाई घरबाटै काम गर्न मुख्यमन्त्री केजरीवालले आग्रह गरेका छन्। एजेन्सी ।
Prevशरीरमा देखिएका यस्ता गम्भीर समस्याको जरा देखी उपचार गर्छ भुटेको लसुनले ! ग्यास्ट्रिकको समस्या छ भने नछुटाई पढ्नुहोला
Nextअसुरक्षा बढेपछि प्रहरीले बढायो निगरानी, राउटे बस्ती सिल
भूकम्पको क्षतिको विवरण, लम्जुङमा सात घर भत्किए, तीन घाइते, अन्य स्थानमा यस्तो छ क्षतिको विवरण
बधाई ! नेपालमा आज एकैदिन ७८९० जनाले जिते को’रोनालाई
अन्तत प्रियंकाले दिइन् छोरीलाई जन्म? (10266)